Profaịlụ ụlọ ọrụ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Home > Gbasara Anyị >Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited otu ike na ndị ọkachamara na-elekwasị anya na ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ karịsịa na ngwaahịa ịsa ahụ: isi ịsa ahụ, setịpụ ịsa ahụ, eriri ịsa ahụ, ụgbọ okporo ígwè na-amị amị.
Anyị nọ na Cixi obodo ebe ọtụtụ puku isi ịsa ahụ na ụlọ ọrụ hose ebe a, ọtụtụ n'ime ha bụ ụlọ ọrụ ezinụlọ n'ime ndị ọrụ 10, uru anyị bụ ịnọgide na-enwe mmekọrịta dị mma na ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe a ma nyere ha aka mbupụ ngwaahịa na ụwa, n'ezie anyị na-enyere ndị ahịa aka ịchọta ọnụahịa kacha mma ebe a. Echegbula onwe gị maka ịdịmma ya, anyị nwere usoro nyocha siri ike iji kwe nkwa ịdị mma. Anyị anọwo n'ahịrị a karịa afọ 10, yabụ anyị maara na anyị ga-elekwasị anya na chrome, ntanye, mmetụta nke ọrụ mgbanwe na ihe ndị ọzọ.
Anyị nwekwara ngalaba nhazi nke anyị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta isi mmiri ịsa ahụ ọhụrụ ma ọ bụ na-achọ imeghe ebu maka ịsa ahụ ugbu a mana ịbelata ọnụ ahịa, naanị chọta anyị, gbalịa ịmepụta ọnụahịa kacha mma maka gị.
Ime ụlọ ịwụ ezinụlọ, ụlọ ịsa ahụ na họtel, ụlọ ịsa ahụ ...
ACS, Rohs, iru, CE/
240 tent injection ịkpụzi igwe,
30 setịpụ igwe ịsa ahụ
8 tent mbukota igwe